शास्त्रअनुसार महिलाले यसरी लगाउनुहोस् सिउँदोमा सिन्दुर, बढ्नेछ पतिको उमेर ! | सुदुरपश्चिम खबर
तपाईले कयौँ व्यक्तिलाई देख्नुभएकै होला कि महिलाहरुले पाउमा बिछिया लगाउने गर्दछन् । तर किन लगाउने गर्दछन् भन्ने बारेमा सायद कमै व्यक्तिहरुलाई थाहा होला ।
यसलाई विवाहित महिलाले नै किन लगाउने गर्दछन् यसको महत्व के छ भन्ने कुरा आज हामी यस पोष्टको माध्यबाट देखाउने छौँ । बिछिया लगाउने चलन सनातन परम्परामा वैदिक युगबाट सुरु भएको हो । जुन अअिलेसम्म पनि लागु भएको छ ।
किन लगाउने गर्छन् त पाउमा बिछिया ?
भनिन्छ कि एक विवाहित महिला को स्वास्थ्य बिछियाले लगाउनाले राम्रो हुन्छ । बिछियाको बारेमा यस्तो तरहले रामायण काल ​​मा भनिएको छ।
बिछिया लगाउने चलन खुट्टा को तीन औंलाहरुको बिचमा हुन्छ। यो औंला को नस गर्भाशय र महिलाहरुको मुटु संग सम्बन्धित छ।गर्भाशय र मुटु संग सम्बन्धित रोगहरु को सम्भावना महिलाहरुले बिछिया नलगाएर हो भन्ने मान्न्छि ।
सुन वा चाँदिको बिछिया हुने गर्दछन् र अनुकुल प्रभाव यसलाई खुट्टामा लगाउनाले हुने गर्दछ । यस्तो मानिन्छ कि बिछिया लगाउनाले मन शान्त हुने गर्दछ ।
बिछिया लगाउनाले महिलामा नियमीत रुपमा महिनावारी हुन्छ भन्ने पनि मान्यता रहेको छ । एक्यू प्रेशर को काम बिछियाले पाउको औँलामा गर्ने गर्दछ ।
त्यस्तै पतिको भलाईका लागी विवाहित महिलाले पाउँमा बिछिया लगाउनुको साथै यसरी सिन्दुर लगाउन पनि राम्रो मानिन्छ ।
महिला को माग मा, सिन्दूर उनको विवाह को एक निशानी हो। पहिले महिलाहरु सिधा माग मा आधा भागसम्म सम्म सिन्दूर लगाउन प्रयोग गर्थे तर अब यसको फैशन परिवर्तन भएको छ र आजकल विवाहित महिलाहरु मात्र निधार मा सिन्दूर को एक सानो लाइन बनाउने गर्दछन् । जहाँ पहिले सुक्खा सिन्दूर प्रयोग गरिएको थियो, अब यो तरल मा परिवर्तन भएको छ।
कसरी लगाउने त सिन्दुर ?
एक विवाहित महिलाले आफ्नो सिउँदोमा सिन्दूर यस्तो तरीकाले लगाउनु पर्छ कि जसलाई त्यो लगाएको सिन्दुर हरेक कोहीले प्रत्यक्ष रुपमा देख्न सकुन् । आजकलअफिस जाने विवाहित महिलाहरुले कसैले पनि सिन्दूर नदेख्ने तरीकाले लगाउँछन् ।
शास्त्र अनुसार, सिन्दूर सधैं सिधा सिउँदोमा नै लागू गर्नु पर्छ, सिउँदो नदेखाइ सिन्दुर लगाउनु वा बाङ्गो सिउँदामा सिउँदोमा सिन्दुर लगाउनु सही मानिदैन ।
तरल सिन्दुर लगाउनुभन्दा सुख्खा सिन्दुर लगाउनु राम्रो मान्छि । यसरी नै सिन्दुर पनि सिउँदोको आधा भागसम्म लगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। नयाँ पुस्ता बाट सभार